Ihe ngosi CMO - August 2013 | Martech Zone
Ihe ngosi CMO - August 2013
Ndị isi ndị na-ere ahịa (CMO) na-ekenyekarị ihe enyemaka na mgbasa ozi mmekọrịta, mana ọnụọgụ na-emenye ụjọ anaghị ahụ nloghachi na ego a, dị ka Ihe ngosi CMO.
Naanị pasent 15 nke 410 CMO gbara prọfesọ Christine Moorman of Mahadum Duke's Fuqua School of Business kwuru na ha egosipụtala ọnụọgụ ọnụọgụ na mmefu ahịa mgbasa ozi mmekọrịta ha. Pasent 36 ọzọ zara na ha nwere ezi mmetụta nke mmetụta tozuru oke, mana ọ bụghị ọnụọgụ ọnụọgụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị CMO nyochara (pasent 49) enwebeghị ike igosi na ọrụ ụlọ ọrụ mmekọrịta nke ụlọ ọrụ ha emeela ihe dị iche. N'agbanyeghị nke a, a na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa mụbaa mmefu na mgbasa ozi mmekọrịta site na 6.6 pasent ruo 15.8 pasent n'ime afọ ise na-esote.
Igosipụta mmetụta nke mmefu ahịa niile na-abụkarị nsogbu zuru oke maka ụlọ ọrụ, dị ka ndị CMO nyochara. Naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa kachasị elu enyochare na-akọ na ụlọ ọrụ ha nwere ike igosipụta mmetụta nke mmefu ha na ahịa. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, dị ka Moorman si kwuo, na pasent 66 nke ndị CMO na-akọ na ha na-enwe nrụgide karịa iji gosipụta uru ahịa sitere n'aka ndị isi na bọọdụ ha. N'ime ndị a, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ na-akọ na nrụgide a na-abawanye.
“Ndị ndu ahia chọrọ ka ndị CMO na-enye ihe akaebe siri ike na itinye ego maka azụmaahịa azụmaahịa na-akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ ha na obere oge. Ndị CMO ga-enweta 'oche na tebụl' naanị ma ọ bụrụ na ha nwere ike igosipụta ihe ahịa ha na-emefu, "Moorman kwuru, onye isi oche nke CMO Survey.
Marketing nchịkọta, ụdị nke azụmaahịa nke nnukwu data, bụ 5.5 pasent nke mmefu ego azụmaahịa ma na-atụ anya ịbawanye na 8.7 pasent n'ime afọ atọ sochirinụ. Ojiji nke nnukwu data a ka bụ ihe ịma aka, agbanyeghị, dị ka pasent nke arụ ọrụ a kọrọ site na iji ahịa dị ma ọ bụ nke a rịọrọ nchịkọta agbadaala site na 35 pasent otu afọ gara aga na 29 pasent ugbu a.
Nke a dabara na nchọta na CMO na-akọ naanị onyinye "nkezi" nke ahịa nchịkọta ịrụ ọrụ ụlọ ọrụ (3.5 na ọnụọgụ 7 ebe 1 "adịghị ma ọlị" na 7 "dị oke oke"). Nọmba a agbadata site na nke mbụ ya otu afọ gara aga mgbe ọ dị na 3.9.
Ndị na-ere ahịa dịkwa na-abawanye mbọ ha n'ịchịkọta data banyere omume ndị ahịa n'ịntanetị. Ihe dị ka pasent 60 anakọtara data omume ndị ahịa n'ịntanetị maka ebumnuche ezubere iche, a na-atụ anya pasent 88.5 ka ọ na-emewanye oge a.
Agbanyeghi nkpu banyere onyunyo na ndi oru ndi mmadu na ndi mmadu, ihe omuma adighi adi ka ndi ahia. Pasent 3.5 nke ndị zaghachirinụ nwere obere nchekasị, ebe naanị pasent XNUMX zara na ha "na-echegbu onwe" banyere nzuzo.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịba ahịa na-akwụwa aka ọtọ na ndị ahịa n'okwu banyere nzuzo – ndị ahịa kwesịrị ịma na a na-ahụ ha, kwenye n'ihe ndị ahụ, wee nweta uru karịa n'aka ndị ahịa na nloghachi, kwuru Moorman
Ndị CMO na-akọ ọkwa nchekwube kachasị elu maka akụnụba US niile n'ime afọ anọ. Na ọnụ ọgụgụ nke 0-100, na 0 bụ onye kachasị nwee nchekwube, akara CMO batara na 65.7, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20-abawanye karịa otu ihe ahụ emere na August 2009, na nso ala ala nke nlaazu ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 pasent nke ndị ahịa kachasị elu zara na ha "nwere nchekwube" banyere akụnụba US niile ma e jiri ya tụnyere nkeji iri na ise gara aga. Laa azụ na 2009, ndị nwere olile anya batara na pasent 14.9.
Ihe nchoputa ndi ozo bu
Uto ahia ahia bu na-atụ anya ịbawanye 4.3 percent n’ime ọnwa iri na abụọ sochirinụ. CMOs kọrọ na mgbanwe na mmefu ga-abawanye 12 pasent afọ abụọ gara aga, na-egosi na mmefu ego a na-aga n'ihu na usoro countercyclical na akụnụba akụ na ụba.
Mgbanwe nke mmefu ahịa dijitalụ nwekwara emeela ka ọ bụrụ pasent 10.1 (afọ atọ gara aga, ọnụ ọgụgụ a bụ 13.6 percent).
Pasent iri abụọ na anọ nke ndị zaghachiri kwuru na Western Europe dị ka ahịa ahịa mba ụwa kachasị elu, China na Canada na-esote (18 pasent ọ bụla).
Tọrọ ntọala na August 2008, CMO Survey na-anakọta ma kesaa echiche nke ndị ahịa kacha elu na United States ugboro abụọ kwa afọ. Mụtakwuo na Nyocha CMO.
Tags: onye isi ahiaKedunyocha cmoonye isi ahiaahịa metricsmetricslaghachi azụmaahịaelekọta mmadụ media roinnyocha e mere
Ọbịa ịde blọgụ - You're na-eme ya na ezighi ezi
OMA: Ọdịnaya Ntanetị na Usoro Ọdịdị okporo ụzọ
Ọ bụ John Broadbent
Ka anyi bido itinye aka na ntinye aka anyi na mgbasa ozi. Nke ahụ bụ otú otu nnukwu akụkụ ndị mmadụ si achọta gị ugbu a. Ọ bụrụ na ị naghị eji ya, ọtụtụ ndị nwere ike ịhụ gị ga-efunahụ gị.
Echere m na ọ bụ ọrụ nke ndị na-ere ahịa iji hụ na ha nwere ebumnuche akọwapụtara yana ụzọ iji soro ihe ịga nke ọma n'iji usoro mgbasa ozi mmekọrịta social wee gosipụta uru nke mbọ ahụ. Enweghị ihe akaebe, ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike itinye ego ha.
N'eziokwu, mgbe ụfọdụ ọ dị nhịahụ igosipụta ma mee ka mmadụ niile kwenye na mgbasa ozi mgbasa ozi dị mkpa taa.
Ndo, * enweghị ike * inwe obiọma. haha.
Ọnye na -bụ Ryan Cox?
Aug 28, 2013 na 2:54 PM
Ezigbo ozi Doug, ekele maka ịkekọrịta. Amaara m na nke a bụ isiokwu m họọrọ ụbụrụ gị banyere n'ọtụtụ oge… .ma ga-aga n'ihu. Maka m, enwere igodo abụọ akọwapụtara ma dị mkpa maka ịbụ ezigbo CMO / marketer:
1) Ezi mmekọrịta na-ewulite ma ndị otu gị, mana mmekọrịta dị na mpụga. Echere m na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị oke mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma.
2) Inyocha ihe dị na pudding gị. E nwere data dịnụ nke nwere ike igosi na ihe na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ na-echeghị ọtụtụ ọrụ. Inwe ikike nke pivot mgbe ihe anaghị arụ ọrụ, na-egosi dịka (Ọ B NOTR NOT NA Ọ BOREGHORE ỌZỌ) banyere ndị ahịa nwere ike ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị jụọ m.
Olee ihe i chere banyere isi okwu abụọ m?